Muxuu yahay taleefanka gacantu ugu wanaagsan sanadkaan oo dhan 2017? | Ragga Stylish
Waxaa jira fursado badan iyo noocyo badan oo kala duwan. Laga soo bilaabo bandhigyada waxqabadka badan ee 4K, akhristaha iris, sii kordheysa caabbinta biyaha, lacag la'aanta wireless, iwm. Taleefanka gacanta ugu fiican ayaa marba marka ka dambaysa sii dhammaystiraya.
Sannadkan oo dhan 2017, soo saareyaashu waxay ku darayeen dhammaan noocyada hal-abuurnimada teknolojiyadda moodelladooda casriga ah. Waa maxay taleefanka gacanta ugu fiican?
Shaashadaha ayaa sii weynaanaya si xallin fiicanna leh. Weli kaamirooyinku way sii fiicnaanayeen oo sii fiicnaanayeen, iyo duubista fiidiyowga oo aad iyo aad u fiican.
Tusaalooyinka moobilka ugu fiican maanta
4 Sharaf 8 Pro
Warshadaha Kuuriya ma joojiyaan wax soo saarka. S7 waxaa lagu badalay qaab leh awood weyn. Galaxy S8 + wuxuu leeyahay wax badan oo qurux badan.
Iyada oo leh 6,2-inch Super Amoled panel iyo 1.440 x 2.960 resolution, Exynos 8895 ama processor-ka Snapdragon 835, 4 gigs oo RAM ah iyo batroolkeeda 3.500 mAh, waa musharax adag oo loogu talagalay taleefanka gacanta ugu fiican ee 2017.
Shirkadda Shiinaha ee P10 ayaa sidoo kale bixisa astaamo xiiso leh, labadaba noocyadeeda aasaasiga ah iyo kuwa ugu horumarsan.
Waxaa ka mid ah arrimaha in la muujiyo, batterigaagu waa kan ugu tayada sareeya (3.200 mAh) iyo kaamiradiisa laba-geesoodka ah waxay ku ifaysaa nalkeeda.
Mar labaad soo saaraha Kuuriya. Markan, LG. Sharadka shirkaddu waxay umuuqatay in lagu qaatay si caqli gal ah markii hore. Laakiin inyar inyar ayaa looxoojiyay sida mid kamid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan.
Shirkadda Japanese-ka ee Sony ayaa miiska soo saartay wax soo saar u qalma inuu noqdo taleefanka gacanta ugu fiican sanadka. Kamaraddeeda waa in la muujiyaa, halkaasoo lagu daro Motion Eye system. Hal-abuurnimadani waxay bilaabmaysaa duubis marka dhaqdhaqaaqa la arko waxayna duubi kartaa fiidiyow 960 fps.
Muhiimadda moodelkan Shiinaha waa ismaamulkeeda, 4.000 Mah oo wanaajisa khibrada isticmaale. Kudar kamarad, lakab habeyn la xoojiyay (Emui), iyo naqshad casri ah.
Xiriir aad u fiican oo udhaxeeya tayada iyo qiimaha qaabka cusub ee Xiaomi. Faa’iidooyinkeeda marka laga hadlayo cabbiraadda, xusuusta, iwm, waxaa ku jira in ka badan batteriga dareeraha ah ee 3.350 Mah. Sidoo kale kamarad gadaal 12 megapixel ah oo dammaanad qaadaysa sawirro cajiib ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Taleefanka gacanta ugu fiican sanadkan 2017
Shaah ama kafee?